“Tigireen miliyoona torbaa eessa jiraataa jirti????? -
“Tigireen miliyoona torbaa eessa jiraataa jirti?????
bilisummaa July 15, 2018	Leave a comment
Tigironni kun miliyoona torba jedhamee Yeroo hedduu ni dubbatama.Garuu Tigireen miliyoona torbaa kun Tigiraayin jiruu???Deebiin isaa miti.Eessa jiru ree?Gaafii sirriiti.Dubbiin akkana.Tigireen baadiyyaa tigiraayii jirtu miliyoona 3 hin geessu.Tilmaaman miliyoona 1.5 ammoo magaala Maqalee jirti.Kan hafte hoo eessa jirti?Ammas gaaffii sirriidha.Deebiin isaa Kan hafte parsantiin 95% Oromiyaa keessa jiraatti. Parsantiin hafte ammoo naannolee biraa keessa jiru.Tigiroonni Oromiyaa keessa jiran kun eessa jiru?
Deebiin isaa kunooti.
1_Kondominiyeemii Finfinnee keessa jiru mee deemati laala.Akkuma jiranitti tigiroota.
2_Kondominiiyeemii amma ijaaramutti jiru dhaqaa ilaalaa.caalmaan tigiroota.
2_Real estate Finfinnee keessa jiru dhaqaati jalqabaa hanga dhumaa keessa deemaa. Achis Kan dhuunfate tigiroota.
3_Mana daldalaa finfinnee keessa jiru irra deemaa daawwadha.Keessattuu naannoo hayaa wuleetti jedhamu(22).Akkuma jiranitti Tigiroota.
4_Mana mootummaa Kan Finfinnee keessa jiru dhaqaa laalaa.Mana qabalee kan jedhamu jechuudha.Tigiroota.
5_Dhaabbata dhuunfaa hedduu isaa deemaa laalaa.tigiroota.
6_Dhaabbata mootummaa fknf gumuruk iddoo hoggansaa irra Kan jiran hundi isaanii tigiroota.
7_Dhaabbata geejjiba galaanaa.(Ethiopian shipping and logistics services). Kunis Tigirootan Kan guuttame.
8_Dhaabbata Midrok deemaa hoggansa irra Kan jiru Tigiroota.
9_Bulchiinsa manneen magaala finfinnee akkuma jirutti Tigiroota.
10_Dargaggoota Tigiree Kan black market irratti hirmaatan Kan waraqaa eeyyamaa qaban.Kan poolisni Hin qabne. Kan kappitaala gurguddaa sochoosan akka jiru hoo beettuu?
11_Dhaabbata xiyyaara xoophiyaa. Hoggansiif Kan qacaruuf Kan ari’us tigiroota.
12_Worshaalee Oromiyaa keessa jiran hooggansi isaanii tigiroota.
…….Kan hafes ni jira…..
Worraaqsi itti aanu kanneen beekuu qaba.Addaan bahee hubatamuu qaba.”
Previous Ethiopia hails its charismatic young leader as a peacemaker
Next Aadaan Oromoo nama boonsa..